प्रचारको नयाँ काईदा, अम्बरेलाई पुग्ला त फाईदा ? « Mazzako Online
प्रचारको नयाँ काईदा, अम्बरेलाई पुग्ला त फाईदा ?
भनिन्छ, चलचित्र चलाउने मुख्य हतियार हो ‘प्रचारप्रसार’ । जति व्यापक प्रचारप्रसार गरियो त्यति नै चासो दर्शकले त्यो चलचित्रप्रति दिन्छन् भन्ने मान्यता छ । अहिलेसम्म हुँदै आएको पनि यहि नै हो । मंसिर ०५ देखि देशभरका हलमा प्रदशर्न हुन लागेको चलचित्र ‘श्री ५ अम्बरे’ ले पनि प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएको छ ।
प्रचारप्रसारमा फरकपन दिएर दर्शकको ध्यान खिच्न यस चलचित्रले प्रचारको नयाँ काइदा शुरु गरेको छ । भर्खरै यस चलचित्रको प्रचार गरिएको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जँहा ‘श्री ५ अम्बरे’ मा समावेश गीतमा ‘भिमफेदी गाइज’ नाम गरेको एक युवा संगठनको नृत्य र संवाद देख्न सकिन्छ । उनीहरुले फिल्मको गीतमा नृत्य गर्दै चलचित्र हेर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
जीवनसाथी फिल्मस्को ब्यानरमा तयार भएको यो फिल्मलाई दीपा बस्नेतले निर्देशन गरेकी हुन् । जसले यसअघि ‘अन्तराल’ बनाएर चर्चा बटुलेकी थिइन् ।
फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ मा सौगात मल्ल, केकी अधिकारीको मुख्य अभिनय छ । फिल्मको निर्माण टीएन आचार्य र दीपक आचार्यले गरेका हुन् ।
यस्तै फिल्मको प्रचारका लागि हाँस्य कलाकारहरुलाई समावेश गरेर प्रोमो बनाइएको छ । जुन अहिले टेलिभिजन र यूट्यूबमा चर्चित छ । श्री ५ अम्बरेले चलचित्र प्रचारप्रसारको लागि तयार पारिएको रेडियो जिङ्गलहरुमा पनि नयाँपन दिएको छ ।
अब हेर्न बाँकी छ, फरक किसिमका प्रचार शैलीहरु अपनाईएको यो चलचित्रले दर्शकको मन जित्न भने सफल हुन्छ कि हुदैन । त्यसको लागि मंसीर ५ गतेसम्म त पर्खनै पर्छ ।